Dowladda oo lacago milyaaraad gaaraya ugu abuureeyso shaqo ajaanibta cusub | Somaliska
Dowladda oo lacago milyaaraad gaaraya ugu abuureeyso shaqo ajaanibta cusub
Dowladda dalkaan Iswiidhan ayaa u qoondeeysay adduun gaaraya shan milyaardi oo siddii shaqo loogu abuuri lahaa dadyowga dalka cusub. Arrintan ayaa sabab u ah demooyinka dalka oo ay aad ugu yaryihiin tiradda dadka dalka ku cusub ee la shaqaaleeysiiyo. Saas oo ay tahayna waxeey dowladdu sii saa dhaqaale lugu taageerayo oo dhinaca mushaarka la siintooda la xirriira.
“Tani waa mid la xirriirta siddii degmoyinku ay dadyow badani shaqooyin uga abuuri lahaayeen iyo adeegyadda dheeraadka ah, lana siinayo gunno dheeraad ah degmooyinka talaabadaas qaada. Ujeedaduna waa in shaqo loo abuuro dadka suuqa shaqada aan ka dhex sida haweenka dalka ku cusub ” ayey trir wasiiradda dhaqaalaha Magdalena Andersson, oo farta ku fiiqday sidda dowlada uga go’an tahay shaqo u abuurista dadyoga cusub.
Gunnadda loo qoondeeyey shaqo abuurista dadyowga cusub, waxeey ka mid tahay balan qaad ay dowladda ku sheegtay in dakhli shan bilyan gaaraya la gelinayo adeega bulshada, waxaana ay ka mid yihiin miisaaniyadda dowladda ay ugu talagashay xilligga deeyrta. Saddex bilyan oo ka mid ah ayaa lugu wadaa in la geliyo la adeeggyadda caafimaadka halka 1,5 oo bilyan-na loo qoondeeyey ama la gelinayo waxbarashadda. Wasiiradda kale oo ay sheegtay in nus bilyanka ka soo haray lacagahaasi iyagana la gelin doono adeegga loo yaqaano “extratjänster” oo ah adeegyadda dheeriga ah, waxaana loogu talagalay in degmooyinka iyo maamuladda dalka ee dhinaca caafimaadka ay shaqooyin siiyaan dadyowga aan suuqa shaqa ka dhex muuqan iyo ajaanibta dalka ku cusub.
Dhinaca kale wasiiradda waxaa ay sheegtay in degmooyinkii ku shaqaaleeya iyagoo adeegsanaya adeegyada dheeriga ah in ay helayaan gunno ay degmooyinka go’aankeeda leeyihiin sida ay isticmaalayaan lacagta .Iyadoo misna sheegtay ineey rajeeyneyso in ay shaqaale badan ay degmooyinku ka howl gelin doonaan xarruummaha daryeelka carruurta, iskuulka iyo goobaha lagu daryeelo dadka waayeeladda ah, si beey tiri ugu dambeyntii ay “carruuraha iyo waayeeladda” u helaan nolol maalmeed degan.
Soomaali beera falasho ka bilaabaysa Sweden
Arbetsförmedlingen waxay shaqo u heshay 10 qof oo soo galooti ah!!
Gabadhaan iyadoo 16 jir ah ayay iskuulka ka taktay, maantana waa bilyaneer